IiNcwadi eziPhambili zeMisebenzi yeeNgaphandle zokuTshintsha Ubomi bakho
Isilumkiso! Ezi ncwadi ziza kutshintsha ubomi bakho
Ezi ncwadi eziphezulu zamaKristu malunga nokuthunyelwa kwamanye amazwe kunye neentlanganiso zobuvangeli bezithunywa zevangeli ziye zatshintshe ubomi kum. Ukuba uthanda ubomi bakho ngendlela efanelekileyo, qwa lasele.
NgamaGates of Splendor nguElizabeth Elliot
Ngama-1956, emahlathini ase-Ecuador, kwahlala iqela elinobukrakra elalisoloko lichasa yonke imizamo yabantu abamhlophe ukuba bafikelele kubo: iAnaas esabayo. Emva kweminyaka yokulungiselela, amadoda amancinci amahlanu anika ubomi bawo ngaphandle kokumisela ukwenza intando kaThixo nokuqhubela phambili ivangeli likaYesu Kristu. Kwiintsuku ezimbalwa emva kokuqala ukudibanisa, amadoda ayebhubha ezandleni zala maqhawe. Sekunjalo, uThixo wasebenzisa leli bali lokuthobela ukutshintsha ubomi emhlabeni jikelele. Kwiminyaka emithathu kamva, umhlolokazi kaJim Elliot, kunye nodade kaNate Saint, waya kuhlala phakathi kweAnaas waza wabafundisa ngothando lukaYesu. Umxholo wencwadi ucaciswe ngamazwi adumile kaJim Elliot, "Akayintsimi enika into engenakuyenza ukuze ayifumane into engayi kuyenza." Kaninzi "
Bruchko nguBruce Olson
Umntu oneminyaka eli-19 onomdla okhethwe ukuphumelela ukulahlekelwa nguYesu Krestu phakathi kwabantu abangabonakaliyo baseMzantsi Melika, kodwa akazange alandele umzekelo owabekwa ngabavangeli basemazweni. Wazibhalela kwiinkcubeko zabantu, wabeka umzekelo owawuza kutshintsha kakhulu ingqondo yeentetho zangaphandle kwiminyaka ezayo. Ibali liyamangalisa, kuya kufuneka ukhumbuze ukuba liyinyaniso. Akukuphela nje ukuzonwabisa, inengozi, ukuhlushwa, ukuhleka nokunqoba, ngumzekeliso wentliziyo yeentlanganiso. Funda ukuba yiwuphi na umthunywa wevangeli omele aqonde ngaphambi kokuya ensimini. Ukuhlaziywa kobulungiseleli bakaBruce Olson ukususela kuma-70 ukuya kwangoku, qi niqiniseke ukuba ufunde isiqhelo, iBruchko kunye neMangaliso ye-Motilone . Kaninzi "
Umthunzi woSomandla ngu-Elisabeth Elliot
Umfanekiso Olungqinelweyo we-Christianbook.com
U-Elisabeth Elliot ungomnye wabalobi bam ozithandayo, njengoko mhlawumbi uqikelele. Ndiye ndafumana ithuba lokumva uthetha ngomntu, kwaye ngumfazi omangalisayo! Kuba mna, ungumqhawe wekholo. Le ncwadi, enye yeeklasiki zayo, ilandisa ngobomi kunye nesigqibo somyeni wakhe onesibindi, uJim Elliot, owafa ngokufa komfel 'ukholo emahlathini ase-Ecuador ngowe-1956. Ixabiso lika-Eugenia, umlobi wenkolo yamaKristu uthi kungcono kunokuba ndikwazi: " uSomandla ... ubonisa ukuba uYesu Kristu uya kuzisa ubuqili obuqilileyo nasiphi na isithunzi esingawela kuyo nayiphi na umphefumlo naluphi na uthando ... ukuba ubomi nothando ziphantsi kokuthintelwa kwakhe. " U-Elisabeth unika uluvo kwiimayari zeJim, kwaye kukuvumela ukuba ufunde ebomini obufihlakeleyo emthunzini woMdali wakhe. Kaninzi "
Umntwana woxolo ngoDon Richardson
Xa abathunywa bevangeli uDon noCarol Richardson (kunye nonyana wabo omncinci, uSteve), bahamba behlala phakathi kweSawi, isizwe esinamandla, isi-cannibal ku-Irian Jaya, babengazi ukuba uThixo uza kubasebenzisa njani ukuzisa iindaba ezilungileyo kweli litye abantu baseNew Guinea. Ngokumangalisa, babeya kufunda ngesithethe sakwaSirayeli sokuqala sokuxolelana esiza kuvulela umnyango womnqamlezo ukubetha iintliziyo zabantu baseSawi. UThixo wayesezilungiselele ukufumana enye, uNyana woNyana woxolo-uNyana kaThixo. Ndinelilungelo lokuva ibali elimangalisayo nelikhuthazayo ngokusuka emlonyeni kaDoni noonyana bakaKarol endala, uSteve, xa wayesethetha ngokutsha esontweni lam. Andiyi kulibala! Kaninzi "
Umntu waseZulwini nguMzalwan 'uYun noPaul Hattaway
UmKristu osemyingeni waseMelika akaze ahlangabezane noko uMfoweth 'uYun ahlangene naye ekuhambeni kwakhe ukuza nokulandela uThixo eChina. Wayeyinyamezela intshutshiso enzulu, intolongo kunye nokuhlushwa kwinqaba yakhe yokulwa nokulwa okuhle kokholo. Wayeqonda amazwi kaPawulos kwi-2 kwabaseKorinte 4: 8, "Sixinzeleleke ngapha nangapha, kodwa asiyi kutyhafaza; siyadideka, kodwa singaphumeleli" (NKJV) . Akukuphela nje le ncwadi ukukhuthaza amaKristu amele akhuthazele ubunzima obunzima, ebala yonke into evuyayo, ngumthombo okholisayo wokunika abantu abathandabuza ubuKristu. Kaninzi "
Umsulwa nguThixo nguMzalwan 'uAndrew, uJohn Sherrill, u-Elizabeth Sherrill
UMzalwan 'uAndreya uyaziqonda iphupha lakhe lokuba ngumntwana xa ephendukela ebuKristwini aze aguqulwe ngokugqithiseleyo iLizwi likaThixo kwiindawo ezivaliweyo kwaye zishushiswa emva kweContain Curtain. Le ntsimi engummatshi waseDutch ishintshe ibe ngumthunywa wevangeli ongumKristu onamandla xa eqala ukwenza izinto ezintle kuThixo. Imimangaliso ilandele yonke i-Bible-smuggling feat. Ibali likaMzalwan 'uAndrew liye lagqugquzela izigidi zamaKristu emhlabeni wonke ukuba zibe ngumngcipheko ngenxa kaYesu Kristu. Ekuqaleni kwanyatheliswa ngaphezu kweminyaka engama-40 edlulileyo, le ncwadi enokuqulathe iququzelele. Kaninzi "
Ukukhala kwiiStransti nguJeannette Lukasse
Eli bali lokubuyisana nokubuyiselwa lisondele kwaye lithandekile entliziyweni yam. Uyabona, ngelixa uhambo lokuya eBrazil, ndandixhalabise kakhulu ngengozi yabangenamakhaya kwaye ndizingela abantwana besitalato. Ndabuyela eBrazil ndachitha ixesha enkonzweni kaJeannette noJohn Lukasse eBero Horizonte. Ukubona ukuvala kwezinto ezinobunzima bezigidi zabantwana abashiyiweyo, ngokuze kubekwe indawo kwindawo yam entliziyweni yabantwana baseBrazil. Ndandifuna ukwabelana ngothando kunye novelwano lukaKristu kunye nala bantu abangenathemba. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, ndabuya ndiza kuhlala ndize ndisebenze eRio de Janeiro ngenxa yezizathu zabantwana besitalato. Le ncwadi yimi umzekelo kum ukuba uThixo unokuthatha ubomi obunikekileyo kwaye asebenzise ukuyichukumisa nokuphulukisa abo balahlekileyo baze bahlukumeze. Kaninzi "
Ukuphela kwentetho nguSteve Saint
Uyise wakhe wayengomnye wabathunywa bevangeli abahlanu ababulawa ngumhlanga onobuhlanga wase-Ecuadorian kwiminyaka yama-1950. Kwiminyaka kamva, ubomi bakhe obuyimpumelelo njengomntu osomashishini wase-US uphazamiseka xa ebuzwa kwisizwe esifanayo ukuba abuye ahlale phakathi kwabo. Bafuna uncedo. Bakhathazeka njengabaceli, abangakwazi ukulungelelanisa nenkcubeko. Ukuze basinde kufuneka bafunde izakhono zokuzimela. Kodwa baye bafumana olunye utshintsho kuba uSteve wayehlala phakathi kwabo njengomntwana. Incwadi igxile kule nguqulelo. Babesakuba ngabantu abahlala ngeli lizwi: bulala okanye babulawe. Kodwa amandla okuxolela ashintshile ukuba abe ngabantu abalandela uThixo. Zibuze njengoko ufunda, ngaba ndingayiyeka ubomi bam obuhle ukuze ndibancede abantu ababulewe ubawo? Kaninzi "
Ngunaphakade Kwiintliziyo Zabo nguDon Richardson
Ukuba uke wabuzwa umbuzo, "Kuthiwani ngabo abangazange bave iindaba ezilungileyo? Bangasindiswa njani?" Le ncwadi inokukunceda ukuba unike impendulo. Umxholo wayo usekelwe kwelinye lamavesi am ndithandayo kwiSibhalo: "Wenze into enhle ngexesha layo, uye wabeka ngonaphakade ezintliziyweni zabantu ..." (INtshumayeli 3:11, NIV ). U-Richardson uhlola iimbali kunye nemasiko yamasiko amaninzi ahlukeneyo, kwaye wabelana ngamabali amangalisa ngendlela uThixo azibonakalise ngayo kunye nesicwangciso sosindiso kubo bantu. Imithetho yeencwadi ezilahlekileyo, izithethe ezingaqhelekanga ezifanelana nomzekeliso kaYesu, kunye neendulo zamandulo zabathunywa abade balindele ukubuyisana, banike ubungqina bokuba uThixo wethu unomdla kuyo yonke indalo yakhe. Kaninzi "
Buyela eYerusalem nguPaul Hattaway
Umfanekiso: I-Scan Scan
Andiyena umfundi wokuzila, kodwa ndadla le ncwadi ngosuku. Andikwazi ukuwubeka phantsi. UPaul Hattaway ulwabelana ngemibono yeenkokheli zecawa yaseChina ukuzalisekisa iKhomishini enkulu . Nangona ushutshiso olunzulu luphoqa amaKristu phantsi kweChina, umyalezo weendaba ezilungileyo uqhubeka ngamandla, kunye nabantu abangaphezu kwezigidi ezili-10 abaza kulwazi uKristu minyaka yonke. Ukholo olunamandla olomoya olubizwa ngokuba yi-Back to Jerusalem movement lusetyenziswa kwiiklasi zendlu yaseTshayina, ukugqugquzela amakhulu kunye namawaka asevangeli baseChina abathunywa bevangeli. Baye bathunyelwa ukuba bafikelele kubantu abangabonakaliyo kwifestile ye-10/40 . Injongo yabo ayikho ngaphantsi kokugqiba iKhomishoni enkulu!
Ukuwa kweBlack Biography
Yintoni oyenzayo xa i-Green Card yakho ilahlekile kwi-imeyile
El Sidrón - Ubungqina be-Neanderthal Cannibalism eSpain
Ukulungiswa kweMpahla kuguquka kwi-Piano Music
IYunivesithi yaseWisconsin-Platteville Admissions
Izizathu zokuthandana "Les Miserable"